Caafimaadka & Amniga Deegaanka - Iskuulada Dadweynaha ee Deegaanka Hargabku ISD 834
Hubinta meelaha nabdoon ee ardaydeenu wax ku baran karaan
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay u qaataan nabadgelyo si dhab ah waxayna u shaqeeyaan si taxaddar leh si loo hubiyo in aan siino jawi waxbarasho oo ammaan iyo caafimaad leh dhammaan ardaydeena.
Xoghayaha Maareeyaha Xarumaha & Hawlgallada Goobta
Waxaan si joogto ah iskuuladeena ugu tijaabino radon, gaas aan midab lahayn, ur aan udgoon lahayn oo si dabiici ah uga yimaada carrada oo lala xiriirinayo qaar ka mid ah dhimashada kansarka marka laga helo heerar sare. In kasta oo imtixaanada loo yaqaan 'radon' aan looga baahnayn dugsiyada ku yaal Minnesota, degmo dugsiyeedkeennu waxay iskuuladeena ku tijaabisay radon waana yaraynay wixii arrimo ah markay soo baxaan. Wareegii ugu dambeeyay ee imtixaanka waxaa la qaaday 2018-2019.
Tijaabinta rasada rasmiga ah ee dhammaan dhismayaashayada waxay dhacday 2018-2019 intii lagu guda jiray Waaxda Caafimaadka ee MN ee lagu taliyay in la dhigo oo ah Nofeembar 1 illaa Maarso 31. Tijaabada waxaa qaaday La-tashiga Deegaanka Field, iyadoo la adeegsanayo Waaxda Caafimaadka ee MN Radon ee Qorshaha Qaabka Dugsiyada
843 tijaabooyinka qasacadaha ayaa la falanqeeyay. Laba waxay lahaayeen xoog ururin bilow ah oo ka sareysa 4.0 pCi / L:
Fasalka Lily Lake 205 = 4.1 pCi /
Xafiiska Dugsiga Dhexe ee Stillwater 189W = 7.5 pCi / L
Tijaabada dabagalka ee labadaas qol waxay muujiyeen isku urursasho aad uga hooseysa heerka waxqabadka:
Fasalka Lily Lake 205 = 1.8 pCi / L
Xafiiska Dugsiga Dhexe ee Stillwater 189W = .6 pCi / L
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, baaritaan dheeri ah / yareyn dambe lagama maarmaan ma aha. Natiijooyinka imtixaanka 2018-2019 ee dugsiyada gaarka ah iyo dhismayaasha hoos ayaa laga heli karaa:
Imtixaanka Afton-Lakeland Radon 2019
Imtixaanka Andersen Radon 2019
Tijaabinta Brookview Radon 2019
Lake Elmo Radon Tijaabinta 2019
Imtixaanka Lily Lake Radon 2019
Imtixaanka Rutherford Radon 2019
Stonebridge Radon Imtixaanka 2019
Imtixaanka Oak-Land Radon 2019
Imtixaanka Radiyaha Dhexe ee Radiyaha 2019
Imtixaanka Radon ee Dugsiga Sare ee Stillwater 2019
Xarumaha Kale ee Degmooyinka
Adeegyada Dhexe Tijaabinta Radon 2019
Xarunta Qoyska Carruurnimada Hore Radon Imtixaanka 2019
Oak Park Dhismaha Radon 2019
Waxaan qandaraas la qaadanay la-taliye xagga deegaanka ah si aan si rasmi ah dhammaan dhismayaashayada ugu tijaabino radon sannadihii 2006-2007 iyo inaan ku qaadno baaris dabagal ah sanadkii 2008 dhismooyinka kor u qaaday heerarka radon-ka. Natiijada baaritaanka asalka ah iyo dabagalka, nidaamyada yareynta radon waxaa lagu rakibay Dugsiga Hoose ee Marine deyrtii 2008 iyo Lake Elmo guga 2009. Tijaabada dabagalka ah waxaa lagu sameeyay iskaashi lala sameeyay Waaxda Caafimaadka MN ee 2010 iyo 2011 waxay xaqiijisay in heerarka sare ay hoos uga hooseeyeen tilmaamaha Hay'ada Ilaalinta Deegaanka ee 4 pCi / L (goos gooska litir hawo ah).
Intii lagu gudajiray sanad dugsiyeedkii 2012-2013 howlwadeenadeena howlgalada waxay tijaabiyeen Andersen, Lake Elmo iyo Marine Elementary iyagoo adeegsanaya aalado lagula socdo radon joogto ah oo ay bixiso Waaxda Caafimaadka MN. Tijaabooyinka waxaa loo qaaday si loola socdo nidaamyada yareynta shucaaca ee degmada. Waqtigaas, xarumahaas midkoodna ma lahayn heerar sare ee radon.
Milkiilayaasha guryaha sidoo kale waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la socdaan heerarka shucaaca. Wixii macluumaad dheeraad ah .
Biyo Cabitaan Ammaan ah
Degmadeennu waxay raacdaa qorshaha moodeelka gobolka ee yareynta macdanta "lead" ee biyaha la cabbo. Tani waxay hubineysaa in dhisme kasta laga tijaabin doono macdanta "lead" ee biyaha la cabbo ugu yaraan hal mar shantii sano mar natiijooyinkana lala socodsiin doono shacabka Natiijooyinka wareegii ugu dambeeyay ee imtixaanka ee 2018-2019 waxaa laga heli karaa hoos. Wareegga xiga ee imtixaanka ayaa la soo gabagabeyn doonaa inta lagu jiro sanad-dugsiyeedka 2023-2024.
Badbaadada Biyaha Dugsiyada Hoose
Badbaadada Biyaha Dugsiyada Dhexe iyo Sare
Badbaadada Biyaha Dhismayaasha Kale ee Degmooyinka
Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Nabdoonaanta Biyaha
Taariikhda Imtixaanka: 5/4/18, 5/8/18 iyo 5/11/18
Saddex iyo afartan muunad ayaa la soo ururiyay. Lix waxay ahaayeen qiyaastii 20 ppb, saddex iyo labaatan waxay ahaayeen wax kayar ama u dhigma 20 ppb laakiin ka weyn 2 ppb. Dhamaan natiijooyinka kale waxay ahaayeen wax kayar 2 ppb ama midkoodna lama ogaan. Warbixinta Eeg .
Waxqabadka Saxitaanka: Lixda saxan ee saxanka ka sareeya 20 ppb waxaa loo calaamadeeyay inaysan cabin kadib markay heleen natiijooyinka. Qasabadahaani waa la beddeli doonaa inta lagu jiro xagaaga 2018.
Cusbooneysiin: Kadib bedelida tuubadahan qubeyska, qasabadaha waxaa dib loo cusbooneysiiyay Sebtember 18, 2018 iyo Noofambar 2, 2018. Dhammaan lixda (6) tuubbooyinka qubeyska waxay leeyihiin heerar hoggaamineed oo ka hooseeya heerka tallaabada 20 ppb. Intaas waxaa sii dheer, ka dib markii loo daayay biyaha inay socdaan 30 ilbiriqsi, ma jirin wax macdanta "lead" oo laga helay natiijooyinka midkoodna. Looma baahna ficil dheeri ah. Eeg Warbixinta La Cusboonaysiiyay.
Taariikhda Imtixaanka: 5/4/18 & 5/8/18
Soddon tijaabo ayaa la soo ururiyay dhamaantoodna lagama helin wax sunta rasaasta ah. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Ficil looma baahna.
Toddobaatan iyo afar muunad ayaa la soo ururiyay. Midkoodna kama badnayn 20 ppb, laba iyo toban kayar ama u dhigma 20 ppb laakiin ka weyn 2 ppb. Dhamaan natiijooyinka kale waxay ahaayeen wax kayar 2 ppb ama midkoodna lama ogaan. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Ficil lama huraan ah si kastaba ha noqotee Kooxda Dhismaha waxaa lagu wargaliyay natiijooyinka ilaha cabitaanka ee jaangooyada mustaqbalka ee goobaha kale.
Taariikhda Imtixaanka: 5/4/18 & 5/8/18 & 11/18
Lixdan iyo toddobo tijaabo ayaa la soo ururiyay. Lix waxay ka sarreeyeen 20 ppb, soddon iyo sagaal way ka yaraayeen ama u dhigmayeen 20 ppb laakiin waxay ka badnaayeen 2 ppb. Dhamaan natiijooyinka kale waxay ahaayeen wax kayar 2 ppb ama midkoodna lama ogaan. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Kululeyda lama isticmaalin sanad dugsiyeedkaan tan iyo markii si rasmi ah ayaa looga saaray adeega. Shanta haro ee hartay ee la baaray ilaa 20 ppb ayaa loo calaamadeeyay inaysan cabin kadib markay heleen natiijooyinka. Qasabadahaani waa la beddeli doonaa inta lagu jiro xagaaga 2018.
Cusbooneysiin: kadib markii la badalay qasabadahaan qubeyska, qasabadaha ayaa dib loo cusbooneysiiyay bishii Sebtember 18, 2018 iyo Noofambar 2, 2018. Afarta (4) ka mid ah (5) tuubbada qubeyska la cusbooneysiiyay waxay leeyihiin heerar hoggaamineed oo ka hooseeya heerka tallaabada 20 ppb. Tuubada qubeyska ee ku taal Xarunta Warbaahinta iyo weelka jikada waxay sii wadaan inay leeyihiin heerarka leedhka oo ka badan 20 ppb. Mar alla markii natiijadan la helo, Degmadu waxay ku calaamadeysay qasabadda qasabadda "biyo aan la cabbin." Sida jikada jikada, Adeegyada nafaqada waxaa lagu wargaliyay inay biyaha socodsiiyaan ugu yaraan 30 sekan si si weyn hoos loogu dhigo heerarka macdanta "lead". Ku shubista biyaha 30 ilbiriqsi ayaa yareeyay heerarka macdanta `` lead '' dhammaan goobaha la tijaabiyay.
Lixdan iyo lix tijaabo ayaa la soo ururiyay. Mid wuxuu ka sareeyay 20 ppb, konton kayar ama u dhigma 20 ppb laakiin ka weyn 2 ppb. Dhamaan natiijooyinka kale waxay ahaayeen wax kayar 2 ppb ama midkoodna lama ogaan. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Kululeyda lama isticmaalin sanad dugsiyeedkaan tan iyo markii si rasmi ah ayaa looga saaray adeega.
Taariikhda Imtixaanka: 11/18 & 12/18
Saddex (3) konton iyo kow (51) shaybaar biyo laga soo ururiyay ayaa ka sareeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Qasabadahaani waxay isugu jireen labo ketter iyo usha lagu buufiyo jikada dhexdeeda. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Maareeyaha Xarumaha, sedexda (3) ilaha waa in la nadiifiyaa (ie aerators / screens) oo dib loo cusbooneysiiyaa. Isla markaa, tubbadahan waxaa lagu calaamadeeyay "biyo aan la cabbin."
Cusbooneysiin: aerator-ka ayaa lagu nadiifiyey warankii lagu buufiyey ee kusugnaa jikada waxaana dib loo cusbooneysiiyey Diseembar 18, 2018. Nadiifinta cod bixiyeyaashu waxay ahayd qaab wax ku ool ah oo lagu dhimayo marka hore isla markaana lagu daadinaayo muunad qaadista ka hooseysa heerka waxqabadka ee 20 ppb. Ma jiro ficil dheeri ah oo lagama maarmaan u ah tuubadan. Marka la eego labada (2) ketteriyada jikada, Adeegyada nafaqada waxaa lagu wargaliyay inay biyaha socodsiiyaan ugu yaraan 30 sekan si si weyn hoos loogu dhigo heerarka macdanta "lead".
Lix iyo toban (16) lixdan iyo afar (64) shay oo biyo laga soo qaaday ayaa ka sareeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Ilaha wax lagu cabo ee ku dhexyaala Fasalka B120 waxay leedhka sareeya ee heerka biyaha la cabbo. Qashin-biyoodyada 'Sink' ee ku yaal Special Ed Classroom A119, Fasalka A112 (waqooyi-bari), Fasalka A112 (bariga dhexe), Fasalka A112 (koonfur-bari), Fasalka A112 (koonfur-bari), Fasalka A112 (koonfurta dhexe), Fasalka A112 (koonfur-galbeed), Fasalka A114 ( bartamaha koonfureed), Fasalka A114 (koonfur galbeed), Fasalka B126, Fasalka B105, Fasalka B118 Kaydinta, Fasalka B120, Fasalka B137, iyo Fasalka B138 ayaa sare uqaaday heerarka biyaha la cabbo. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Maareeyaha Xarumaha, lixdan (16) qasabadood waa in la nadiifiyaa (ie aerators / screens) oo dib loo cusbooneysiiyaa. Isla markaa, tubbadahan waxaa lagu calaamadeeyay "biyo aan la cabbin."
Cusbooneysiin: aerators-ka waxaa lagu nadiifiyey lix iyo toban (16) goobood oo biyo ah waxaana dib loo cusbooneysiiyey Diseembar 4, 2018. Kow iyo toban (11) xarumood ayaa si wax ku ool ah looga dhimay heerka waxqabadka ee 20 ppb. Ma jiro ficil dheeri ah oo lagama maarmaan u ah qasabadahaan. Shan (5) isku dheelitir ayaa weli ka sarreeya xadka. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad u ogolaato biyaha inay socdaan 30 ilbiriqsi, isku uruurinta leedhka ayaa ka hooseeya heerka ficil ee dhamaan iskuxirka. Sidaa darteed, soo maydhashada ka hor isticmaalka waa hab la ogol yahay oo lagu yareeyo soo-gaadhista macdanta "lead". Muddo-dheer, Maareeyaha Xarumaha iyo Hawlgallada Goobta ayaa qiimeyn ku sameyn doona qalab suuragal ah iyo dhuumaha laynka dambe.
Taariikhda Imtixaanka: 11/18
Hal (1) lix iyo afartan (46) tijaabo oo biyo laga soo qaaday ayaa ka sareeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Tuubada kor u kacday waxay ahayd tuubada qubeyska oo ku taal gudaha Kaydinta Qalabka 147. Sayniska iyo qolka qolka farshaxanka lama tijaabin; Degmadu waxay dhejisey calaamado ku saabsan jadwalka caynkaas ah oo ay ku qoran tahay, "biyo aan la cabbin." Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Tuubada biyaha lagu qubo oo ku dhex taal Qalabka keydka 147 waxaa lagu calaamadeeyay "biyo aan cabbin."
Seddex (3) shan iyo konton (55) shaybaar biyo ah oo la soo aruuriyay ayaa ka sareeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Tuubada biyaha lagu dhaqo ee ku taal FACS Fasalka 180W (derbiga waqooyi-galbeed), tuubada biyaha lagu dhaqo ee ku taal Fasalka 104S, iyo tubbada weelka ee ku yaal Fasalka 190W waxay sare u kiciyeen hoggaanka heerarka biyaha la cabbo. Sayniska iyo tubbada qolka farshaxanka lama tijaabin; Degmadu waxay dhejisey calaamado ku saabsan jadwalka caynkaas ah oo ay ku qoran tahay, "biyo aan la cabbin." Warbixinta Eeg.
Ficil Saxitaan: Maareeyaha Xarumaha, sedexdaan (3) qasabadaha biyaha waa in la nadiifiyaa (ie aerators / screens) oo dib loo cusbooneysiiyaa. Isla markaa, tubbadahan waxaa lagu calaamadeeyay "biyo aan la cabbin."
Cusboonaysiinta: aerators-ka waxaa lagu nadiifiyey seddex (3) qasabadood oo la aqoonsaday oo dib loo cusbooneysiiyay Diseembar 4 & 18, 2018. Nadiifinta codeeyaha waxay ahayd qaab wax ku ool ah oo lagu yareeyo marka hore isla markaana lagu soo qaado shaybaarka jaantuska oo ka hooseeya heerka waxqabadka ee 20 ppb. Looma baahna ficil dheeri ah.
Hal (1) boqol iyo siddeed iyo labaatan (128) shaybaar biyo ah oo la ururiyey ayaa ka sarreeyey xadka lagu taliyey ee ah 20 ppb. Tuubbada sare waxay ahayd qasabad biyo-mareen ah oo ku taal Qolka Qolka Warbaahinta ee D214. Sayniska iyo tubbada qolka farshaxanka lama tijaabin; Degmadu waxay dhejisey calaamado ku saabsan jadwalka caynkaas ah oo ay ku qoran tahay, "biyo aan la cabbin." Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Tuubada biyaha lagu qubo ee ku taal Qolka Warbaahinta ee Xarunta (D214) waxaa lagu calaamadeeyay "biyo aan cabbin."
Hal (1) konton iyo toddobo (57) shaybaar biyo ah oo la soo ururiyay ayaa ka sarreeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Tuubbada sare waxay ahayd qasabad biyo-mareenka oo ku dhex taal Qolka Daaweynta 7. Warbixinta Muuqaalka.
Waxqabadka Saxitaanka: Tuubada biyaha lagu qubo ee ku dhex taal Qolka Daaweynta 7 ayaa lagu calaamadeeyay "biyo aan cabbin."
Dhismaha Adeegyada Dhexe
Afar (4) shaybaar ayaa la soo ururiyay dhammaantoodna waxay aad uga hooseeyeen heerka lagu taliyay ee ah 20 ppb oo loogu talagalay macdanta "lead" ee biyaha la cabbo. Warbixinta Eeg.
Dhismaha Oak Park
Afartan iyo kow (41) lixdan iyo sadex (63) shay oo biyo laga soo qaaday ayaa ka sareeyay xadka lagu taliyay ee ah 20 ppb. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaybaha dhismaha aysan deganeyn sanad dugsiyeedkan. Warbixinta Eeg.
Waxqabadka Saxitaanka: Waaxda Caafimaadka ee Minesota, heerarka sunta rasaasta ee biyaha gudaheeda nidaamka tuubada dhismuhu aad ayey ugu kala duwanaan karaan tuubada ilaa qasabada maadaama qaababka isticmaalka ay saameyn ku yeelanayaan xaddiga leedhka ku jira biyaha la cabbo. Qaababka isticmaalka biyaha ee "soo noqnoqoshada, marlabaad" ee iskuulada badankood waxay gacan ka gaysan karaan sare uqaadida heerarka sunta rasaasta. Tani waxay u badan tahay inay tahay qodobka soo noqnoqda ee natiijooyinka sare ee laga helo dhismaha gudihiisa. Marka loo eego Maamulaha Xarumaha, afartan iyo kow (41) qasabadood ee la tilmaamay waa la nadiifin doonaa (yacni hawada / shaashadaha) waana la cusbooneysiin doonaa. Isla markaa, tubbada ayaa lagu calaamadeeyay "biyo aan la cabbin."
Cusboonaysiin: aerators-ka waxaa lagu nadiifiyey kow iyo afartan (41) goobood oo biyood ah. Ficilkani wuxuu yareeyay macdanta "lead" ee biyaha kana hooseysa heerka ficil ee 20 ppb ku dhowaad kalabar iskuxirka. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad u ogolaato biyaha inay socdaan 30 ilbiriqsi, isku uruurinta leedhka ayaa ka hooseeya heerka ficil ee dhamaan iskuxirka. Sidaa darteed, soo maydhashada ka hor isticmaalka waa hab la ogol yahay oo lagu yareeyo soo-gaadhista macdanta "lead". Muddo-dheer, Maareeyaha Xarumaha iyo Hawlgallada Goobta ayaa qiimeyn ku sameyn doona qalab suurtagal ah iyo mashruuca beddelaadda dhuumaha dambe ee bilaha xagaaga.
Macdanta "lead" ee biyaha waa natiijada ka timaada alxanka, dhuumaha iyo qalabka naxaasta. Markasta oo ay biyuhu sii dheeraadaan nidaamka tuubada, suurtagalnimada weyn ee jirta ayaa u jirta macdanta "lead" ee biyo gelinta. Taasi waxay ka dhigan tahay in qalabka tuubbada ee fadhiista aan la adeegsan habeenki iyo sabtiyada iyo axadaha ay yeelan karaan heerar sare oo leedh ah oo ku jira biyaha.
Sida laga soo xigtay MDH, dhammaanba kiisaska la soo sheegay ee wasakhda rasaasta ee leedhka waa natiijada ka dhalata soo-gaadhista guriga. Waxaan ku dhiirrigelinaynaa qoysaska inay noqdaan kuwo aqoon u leh khataraha guryahooda. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan badbaadada biyaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota .
* ppv = qaybo halkii bilyan
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) waxay si xoogan ugu talineysaa in iskuuladu ay qaadaan talaabo sixitaan ah hadii shaybaarada laga soo qaado qasabadaha biyaha la cabo ay soo saaraan heerar ka badan kuwa loo yaqaan 'ppb'.